တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆောင်းပါးကဏ္ဍ တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ
ဒီ PDF ကို ရည်ညွှန်းဖို့အတွက်ပဲ အလိုအလျောက် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသွင်ပြောင်းမှု အမှားတချို့နဲ့/ ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ တရားဝင် အသုံးပြု မှု အားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပြု ၍ ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါ်ရှိ တရားဝင် ဗားရှင်း ကို အောက် တွင် ချိတ်ဆက် ထား သည့် အတိုင်း ရည်ညွှန်း ပါ ။
ဂျော့ဂ်ျ လောဆန်၊ ဩဂျီ ၆ ၂၀၁၉
တော်လှန်ရေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ငါနေထိုင်ရာနေရာကိုယူပါ။ လန်ဒန်မြောက်ပိုင်း ဟိုက်ဘူရီ ။ ၁၄ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ကျေးလက်အလုပ်သမားတွေဟာ ဟိုင်းဘရီ ကို ချီတက်ပြီး ဒေသခံ အခွန်ပုန်ကန်မှုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပေမဲ့ အထွေထွေအကျပ်အတည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ တောင်သူလယ်သမားပုန်းလို့ လူသိများလာတဲ့ ပုန်ကန်မှုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ကျေးလက် အလုပ်သမားတွေကို မီးရှို့ခဲ့ကြတယ်။ Stoke Newington အနီးအနားမှာ နယူးရင်တန် အစိမ်းရောင် ယူနီတာရီ ယန်ချာ့ခ်ျကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၁၈ ရာစုအတွင်း မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသော အစည်းအဝေးအိမ်ဟု လည်း လူသိများသော အထူးသဖြင့် မေရီ ဝေါလ်စတုန်းဖ်နဲ့ ရစ်ချက် ပရိုက်စ်တို့ပါ။ စျေးနှုန်းပြောဆိုတာကို ကြားရတဲ့သူတွေထဲမှာ သောမတ်စ် ပိန်းနဲ့ သောမတ်စ် ဂျက်ဖာဆန်တို့ပါဝင်တယ်။
ကျွန်တော် အလုပ် လုပ်တဲ့နေရာဆီ ဦးတည်သွားတဲ့ နေရာကို ၊ အယ်လ်အက်စ်အီးမှာ ၊ လန်ဒန် တော်လှန်ရေး ဗဟိုချက်ဖြစ် ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ကလာကန်ဝဲလ်ဂရင်းကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ကလာကင်ဝဲလ် ဂရင်းနှင့် ၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနေသော အုပ်စုများစွာ၏ နေအိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်မြို့မှာ လီနင် ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရချိန်အတွင်း ကွန်မြူနစ်သတင်းစာ အစ်ကရာကိုအခု မာ့ခ်စ် သတိရအောက်မေ့ရာ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်တဲ့ အဆောက် အအုံတစ်ခုမှာ ဒီမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ဗျူဗိုရာတောင်းမြို့က လမ်းအောက်မှာ လီနင်၊ စတာလင်၊ စတာလင်၊ ထရော့စကီ၊ ကိုလိုတိုင်း၊ လူဇင်ဘာ့ဂ် အပါအဝင် ကွန်မြူနစ် ၃၀၀၀ ကျော်ဟာ တာဆာရစ်ရုရှားကို ဖြိုချပြီး ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် ၁၉၀၇ ခုနှစ် မေလမှာ (ချာ့ခ်ျတစ်ခုမှာမဟုတ်ဘဲ) နှစ်ပတ်ကျော် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လန်ဒန်ကို အိမ် ဒါမှမဟုတ် ဌာနချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေထဲက တချို့ပဲ။ ထိုစာရင်းတွင် ကားလ်မာ့ခ်စ်၊ SimÓn Bol ehi var နှင့် Ho Chiminh တို့မှ မက်ဒန် လာလ် ဒင်ဂရာနှင့် ဖရန်စစ္စကို ကာမားတို့ကဲ့သို့သော လူသိနည်းသော ဇာတ်ကောင်များအထိ ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
ဤ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်မှုများသည် တော်လှန်ရေးများ၏ အရေးပါမှု၏ တစ်ခုတည်းသော လက္ခဏာများ မဟုတ်ပါ။ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံများသည် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတည်ထောင်ရေးအတွက် ဗဟိုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အမွေအနှစ်များသည် အစိုးရ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ စစ်ရေးနည်းဗျူဟာများ၊ စစ်ရေးနည်းဗျူဟာများ၊ အားလပ်ရက်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များ၊ အထိမ်းအမှတ်များ၊ တေးဂီတ၊ သို့တိုင် ခေတ်ပြိုင်လောကတွင် တော်လှန်ရေးသည် တစ်ချိန်က အိမ်တွင်းအစွန်းရောက်စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာလေ့ရှိပြီး စောင့်ကြည့်နေသော အရင်းရှင်ဝါဒနှင့် ပြင်းထန်မှုနည်းသော ဒီမိုကရေစီလောကအတွက် လုံခြုံမှုရှိစေခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များက အမ်မနူဝဲလ် မက်ခရွန်နှင့် အီလွန် မတ်ခ်ကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းများကို တော်လှန်ရေးသမားများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး အလွန်လူကြိုက်များသော ဂီတဟယ်မီလ်တန်နှင့် ပို၍ပင် ရေပန်းစားသော စတားစစ်ပွဲ စီးရီးများကမူ တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ ရုန်းကန်မှုကို မြှင့်တင်ခဲ့ကြသည်။ တော်လှန်ရေးအယူအဆကို ကျယ်ပြန့်စေခြင်းသည် မီဒီယာများနှင့် လူကြိုက်များသော ယဉ်ကျေးမှုတို့ကြောင့် လက်ခံယူခြင်းထက် ကျော်လွန်သည်– www.revolution.com စွန့်စားစီးပွားရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး www.revolution.co.uk ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး www.revolution.com.au သည် ခွေးများနှင့် ကြောင်များအတွက် လှေနှင့် နှလုံးသွေးကြောကုသမှုဖြစ်သည်။
သို့တိုင် ၊ တော်လှန်ရေးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဗျူဟာ တစ်ခု ၊ ဂိမ်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အိမ်မွေး မွေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထက် များစွာပို ကျန်ရှိနေသည်ကို သဘောပေါက်ရန် အချိန်တစ် ခဏသ အချိန်ယူရသည် ။ တကယ်တော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဟာ တော်လှန်ရေးအတွက် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူဒန်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ အဖြစ်အပျက်များမှာ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများသည် မတရားမှု၊ ဖိနှိပ်မှု၊ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုတို့၏ ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် အသက်ရှင်နေသော အင်အားစုတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဖော်ပုံ များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တော်လှန်ရေးများသည် လက်ရှိအခြေအနေများကို ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ရွေးချယ်သော လူမှုရေး အမိန့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မတရားမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် တည်မြဲသော လူ့မျိုးဆက်ပွားမှု ကို အဆက်မပြတ် သတိရစေ သည်။
အကယ်၍ တော်လှန်ရေးမီးလောင်မှုများကို မီးလောင်ကျွမ်းစေသော လောင်စာသည် အချိန်နှင့် နေရာအနှံ့ ပြောင်းလဲသွားပါက တော်လှန်ရေးများသည် လေ့လာဆန်းစစ်မှု၏ တည်ငြိမ်သော အရာဝတ္ထုများမဟုတ်ဘဲ အချိန်နှင့် နေရာအနှံ့ ပုံစံပြောင်းသွားသည့် ဖြစ်စဉ်များကို လိုက်နာပါသည်။ တော်လှန်ရေးများကို အယ်ဂျီးရီးယားနှင့် အင်ဂိုလာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၊ ဟေတီနိုင်ငံရှိ ကျွန်များ၊ အမေရိကနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပညာရှင်များ၊ ရုရှား၊ တရုတ်ပြည်၊ နီကာရာဂွာရှိ ကွန်မြူနစ်များ၊ နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ လစ်ဗျားနှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရှိ အစွန်းရောက်စစ်တပ်အဖွဲ့များ၊ မက္ကဆီကို၊ ကျူးဘားနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ လယ်သမားများ၊ အီရန်နိုင်ငံရှိ လက်ဝဲဝါဒီများ၊ ကျောင်းသားများ၊ ကုန်သည်များ၊ ဓမ္မဆရာများ၏ ထူးဆန်းသော မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၏ သိလိုစိတ်ကိုပင် ရောနှောထားသည့် အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ လူငယ်များ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ‘ultra’ ဘောလုံးပရိတ်သတ်များ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားအဓိကအုပ်စုတိုင်းတွင် တော်လှန်ရေး အယူအဆ ရှိသည်။ အီပနာစတေ့စ်(တော်လှန်ရေး) ဂရိအယူအဆများကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပေမည်။ အာရပ် စကားလုံးသာ (တော်လှန်ရေး) နှင့် တာမာရုဒ် (ပုန်ကန်မှု/ သောင်းကျန်းမှု)၊ ပေါင်းစပ်ထားသော (ပုန်ကန်မှု)၊ ဂန္ထဝင် ဟေဗြဲ ဘာသာစကား ကျောက်မျက်ရတနာ (ကံကြမ္မာ၊ ကံကြမ္မာ ပြောင်းလဲခြင်း) နှင့် လက်တင်ကြိယာတော် (ပြန်လာရန်) တို့၏ အယူအဆများဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးများတွင် အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးဆိုရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ စစ်သွေးကြွ ဆာလာဖစ်များသည် ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး၊ မာ့ခ်ျယန်နှင့် ခေတ်နောက်ပိုင်း ထုံးတမ်းစဉ်လာများမှ ချေးငှားယူကြသကဲ့သို့ လီနင်သည် တေလိုရစ်မ်နှင့် အခြားအရင်းရှင်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများအပေါ် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် တီဟီရန်မြို့ရှိ ဆန္ဒပြသူများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ တော်လှန်ရေးသမားများက နိုင်ငံတကာ၏ ဒေသန္တရအမျိုးမျိုးကို သီဆိုခဲ့ကြသကဲ့သို့ Che Guevara t ရှပ်အင်္ကျီများကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး မကြာသေးမီက ဂိုင်းဖော့ခ် မျက်နှာဖုံးများ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
တော်လှန်ရေး ဓလေ့ထုံးစံများသည် အလွန်ပျော့ပျောင်းလွန်းသဖြင့် ခေတ်ပြိုင်လောကတွင် တော်လှန်ရေးနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှုပ်ထွေးနေခြင်းကြောင့် – တော်လှန်ရေး၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် အလေ့အကျင့်တို့တွင် အဓိက ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ အတိတ်က တော်လှန်ရေးတွေက လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ် အခြေအနေတွေကြား သိသိသာသာ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုအပေါ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ရင် ယနေ့ တော်လှန်ရေးသမားများသည် ခေတ်ပြိုင်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အက်ကွဲမှုများနှင့် အက်ကွဲမှုများတွင် အလုပ် လုပ်တတ်ကြသည် – အင်္ဂလန်၊ ဟေတီ၊ ဟေတီ၊ ဟေတီ၊ မက္ကဆီကို၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ ကျူးဘား၊ ဗီယက်နမ်၊ အီရန်နဲ့ တခြား ‘ကြီးကျယ်တဲ့’ တော်လှန်ရေးတွေပါ။ ကြီးမားတဲ့ ‘R’ တော်လှန်ရေးက သမိုင်းမတရားမှုတွေကို ရွေးနှုတ်တဲ့ မေရှိယ တစ်ယောက်အဖြစ် တင်ပြခဲ့ပေမဲ့ သေးငယ်တဲ့ ‘r’ တော်လှန်ရေးတွေကတော့ နှိမ့်ချမှုရှိပါတယ်။ သူတို့၏ကတိသည် မြေကြီးကို ကယ်တင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အစွန်းရောက် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ် နိုင်ခြေအတွက် တောင့်တခြင်း၊ ရိုဂျာဗာ ဒေသတွင်းရှိသူများက လွတ်လပ်စွာ လွတ်လပ်စွာ မြူနီစီပယ်ဝါဒ၏ အစွန်းရောက် ပုံစံများကို ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ဤကျင့်ဝတ်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုတရားမျှတမှုပတ်လည်မှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု အသစ်တွေကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ၊ လက်ရှိအဆင့်အတန်းတွေကို စိန်ခေါ်တဲ့ ကဏ္ဍအချင်းချင်း မဟာမိတ်တွေမှာပါ။ ခေတ်ပြိုင်အသုံးပြုမှုများသည် ပုံစံပြာများမဟုတ်ဘဲ စည်းမျဉ်းစာအုပ်နှင့် ချက်ပြုတ်နည်းထက် ပြုပြင်ဖန်တီးမှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံစံပြာများမဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ခေတ်ပြိုင်လောကတော်လှန်ရေးများသည် တော်လှန်ရေးစမ်းသပ်မှုနှင့် အမှားတို့၏ ကြာရှည်သော ထုံးတမ်းစဉ်လာအတွင်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးများ တည်ရှိခဲ့သော်လည်း အနည်းဆုံး ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ၎င်းတို့၏ အကြီးမားဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခေတ်မီမှုအောက်တွင် ခံစားခဲ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ရာမှ သုံးရာကျော်အတွင်း ပြည်တွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမိန့်များကို ပြန်လည်အသုံးချရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပုံဆောင်ဖြစ်စဉ်များ (ဘူဇန်နှင့် လောစန် ၂၀၁၅) တို့ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ဖြစ်သော ကြယ်စုတန်းများ – ခေတ်သစ် ပြည်နယ်စနစ်၊ စက်မှုအရင်းရှင်ဝါဒနှင့် အဓိက နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များ – ကမ္ဘာချီရောက်ရှိမှုပါဝင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်း ကမ္ဘာချီသမိုင်းသည် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဝေမျှထားသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အရင်းရှင်ဝါဒ တိုးချဲ့ခြင်း (နှင့် ၎င်း၏ ပျံ့နှံ့မှုကို ခုခံနိုင်စွမ်း) ၊ စကြဝဠာဝါဒီအယူဝါဒများ ပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုတို့ကြောင့် အတင်းအကျပ်ပြုမှု အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် မျက်မှောက်ခေတ်ဆိုသည်မှာ အာနက်စ် ဂဲလ်နာ (၁၉၈၈) ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ခေတ်သစ်ဖိအားများကို စုစည်းခြင်း၏ ‘ဒီရေလှိုင်း’ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဆူနာမီကိုတော့ တကယ့်ကို မခံစားရဘူး။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ နယ်ချဲ့ဝါဒနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားအစရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ သည် ကမ္ဘာ့ဒေသအများစုကို ထိခိုက်စေခဲ့သော်လည်း ယူနီဖောင်းဖြင့် ထိုသို့မပြုလုပ်ခဲ့ကြချေ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေ၊ ဘာသာရေးအသစ်တွေနဲ့အတူ ဘာသာရေးအသစ်အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ယင်း၏အဓိကအချက်မှာ မျက်မှောက်ခေတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ပိုများသော်လည်း မညီမျှမှုတိုးများလာခြင်းနှင့် ကမ္ဘာချီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများနှင့် ဒေသန္တရ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက် ဒရိုက်ဗ်များနှင့်အတူ ကမ္ဘာချီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလို ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွင်းမှာ တော်လှန်ရေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိအရှိဆုံး ပုံစံကို ယူမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မာတင်ဝိုက် (၁၉၇၈/၁၉၄၆: ၉၂) သည် ၁၉၇၀ လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် ရေးသားခဲ့သော ၁၉၇၀ လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းငါးရာကျော်၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် တော်လှန်ရေးနှင့် တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်ရေး ပြည်နယ်များအကြား ပဋိပက္ခတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ Wight ရဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေချိန်ကတည်းက သမိုင်းမှာ တော်လှန်ရေးအကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ‘တော်လှန်ရေးခေတ်သစ်’ (Goldstone 2016: ii) မှာ အသက်ရှင်နေပါတယ်။ တော်လှန်ရေးသည် ၎င်း၏ကတိတော်များအပေါ် အပြည့်အဝမပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း တော်လှန်ရေးများသည် ၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်တွင် သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများ ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးက အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာအယူအဆတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစုအတွင်း ဥရောပနိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးခဲ့သော အကြွင်းအကျန်ဝါဒနှင့် သမ္မတနိုင်ငံရေးအယူဝါဒတို့၏ ပဋိပက္ခများဖြစ်သည့်နိုင်ငံရေး ‘ဘယ်ဘက်’ နှင့် ‘လက်ယာ’ တို့၏ အယူအဆများဖြစ်သည်။ ရုရှားတော်လှန်ရေးသည် ၂၀ ရာစုအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပြည်နယ်များစွာအတွက် အစွမ်းထက်သော ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်နယ်ဦးဆောင်သော စက်မှုလက်မှုပုံစံတစ်မျိုးကို ရှေ့ဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ကျူးဘားတော်လှန်ရေးများသည် အေးစက်သောစစ်ပွဲအတွင်း သောင်းကျန်းသူ ‘တတိယကမ္ဘာ’ ပတ်ပတ်လည်တွင် လှုပ်ရှားနေသည့် တောင်ပိုင်း တော်လှန်ရေး အမျိုးမျိုးကို ပုံနမူနာပြခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် အီဂျစ်တော်လှန်ရေးသည် ၁၉၅၀ နှင့် ၁၉၆၀ လွန်နှစ်များအတွင်း ဒေသတွင် တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည့် စစ်ရေးဦးဆောင်သော လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုပုံစံတစ်မျိုးကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ နှိုင်းယှဉ်လို့ရတဲ့ ပုန်ကန်မှုတွေက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မြောက်အာဖရိကနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မငြိမ်မသက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သလိုပဲ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အရှေ့ဥရောပနှင့် ဗဟိုဥရောပတို့တွင် ‘ပြည်သူ့အာဏာ’ ပုန်ကန်မှုများသည် ခေတ်ပြိုင်လောကတွင် လက်နက်မဲ့ တော်လှန်ရေး အမျိုးမျိုးအတွက် လောင်းကျောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မည်သည့် တော်လှန်ရေးကိုမဆို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါစေ သူတို့သည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား နှစ်ခုစလုံးတွင် အခြေအနေကို အာဏာပိုင်များအတွက် စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေကြပြီး သူတို့၏အိမ်တွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမိန့်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ပုံနမူနာများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးများနှင့် တော်လှန်ရေးများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့သည်သီအိုကရက်တစ် ခေတ်မီခြင်း၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်ရေးတို့မှတစ်ဆင့် ဖြစ်စေ၊ တော်လှန်ရေးများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့သည် အခါအားလျော်စွာ အဖြတ်အမှတ်အသားများမဟုတ်ဘဲ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့သမိုင်း၏ သဒ္ဒါဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တော်လှန်ရေးများသည် အဓိကနည်းသုံးနည်းဖြင့် အရေးပါသည်။ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကို ပုံသွင်းရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သော အခြေခံဖြစ်စဉ်များအနေနှင့်၊ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာများနှင့် စကားပြောဆိုသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အမျိုးအစားများအနေနှင့် – မျက်မှောက်ခေတ်၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လူများ တိုက်ခိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့သည့် ပုံမှန်စီမံကိန်းများအဖြစ်လည်းကောင်း။ တော်လှန်ရေးတွေ ဘယ်လို ပေါ်ထွက်လာတယ်၊ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရာမှာ တော်လှန်ရေးအပြောင်းအလဲရဲ့ ‘ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒ’ ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရာမှာ တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကို စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့ (Go နဲ့ လောဆန် ၂၀၁၇၊ လောဆန် ၂၀၁၉)။ ထိုသို့သော ကမ္ဘာချီသမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒမျိုးတွင် သုံးပိုင်းရှိသည်။
ဦးဆုံးအနေနှင့် တော်လှန်ရေးများ စတင်၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် အဆုံးတွင် အပြန်အလှန် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများသည် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်စေသည့် နည်းလမ်းများကို အလေးပေးဖော်ပြသည့် ‘လူမှုအချင်း’ အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်အများစုဟာ ခုံနှစ်ခုထဲက တစ်ခုအတွင်း ကျဆင်းသွားတယ်– ပထမ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတွေကို မြင်ရတဲ့ အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတွေ၊ ဒုတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပိုင်းခြားသိမြင်မှုရှိတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အကောင့်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ထားပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဆိုက်တွေကြားက နေရာကို ဆက်သွယ်ပြီး သီအိုရီမလုပ်နိုင်ဘူး။ ထိုနည်းဖြင့် နှစ်ဦးစလုံးသည် ‘နည်းပညာဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးဝါဒ’ – နိုင်ငံ/ပြည်နယ်/လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အထွတ်အထိပ်၊ သဘာဝသုတေသနပြုရာနေရာအဖြစ် နိုင်ငံ/ပြည်နယ်/လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး)ကို ‘နည်းပညာဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးဝါဒ’ ၏ သားကောင်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအချင်းချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုကတော့ ခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကို လုပ်ပေးတယ်။ ယင်းသည် တော်လှန်ရေးများအပေါ် ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်ရပ်များ၏မျိုးရိုးဗီဇအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့် ဖော်ပြချက်တစ်ခုကို လက်ခံထားသည်။ ယင်းက လူမှုရေးဆိုက်များ (နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စကြဝဠာဗေဒ၊ သာမန်ဘောင်များနှင့် ထို့ထက်မက) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို သီအိုရီပြုထားသည့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာ လူမှုအချင်းချင်းဆိုင်ရာ အကောင့်တစ်ခုကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ ပြည်နယ်အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုက ပါဝင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါ၊ နိုင်ငံတကာ သင်ယူမှုပုံစံများ၊ ‘အဆင့်မြင့်’ လူမှုရေးအမိန့်များကို တုပခြင်း၊ နည်းပညာအသစ်များကို လက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအပေါ် ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ တော်လှန်ရေးဆန့်ကျင်ရေး စီမံကိန်းများ ပျံ့နှံ့ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒီ ‘အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု ပွားများပြားမှု’ – ကွဲပြားခြားနားတဲ့ တည်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ လူမှုရေးအပြောင်းအလဲတွေကြား ဆက်သွယ်မှုတွေဟာ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် (Rosenberg 2016) ။ တော်လှန်ရေး၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်က တော်လှန်ရေးတွေကို သမိုင်းဝင်ဖြစ်စေပါတယ်။ သမိုင်း ဆိုင်ရာ လေ့လာ မှု သည် တော်လှန်ရေး လေ့လာ မှု များ ၏ ကြာမြင့် စွာ ကတည်းက အသွင်အပြင် တစ် ခု ဖြစ် ခဲ့ သော်လည်း ၊ ၎င်း သည် အချိန် နှင့် နေရာ ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ အကျိုး သက်ရောက် မှု အတွက် စိုးရိမ် ပူပန် မှု တစ် ခု သည် ဗဟို အဆင့် သို့ ရောက် ရှိ လာသော သမိုင်းဝင် ချဉ်းကပ်မှု တစ်ခုနှင့် အမြဲ မတူညီခဲ့ပါ။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အလေ့အကျင့် တစ်ခုအနေနှင့် တော်လှန်ရေး၏ တည်တံ့မှုအကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်တစ်ခုမှာ ယင်း၏ပျော့ပျောင်းမှုဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးတွေဟာ တစ်ခုတည်းသောအရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံစံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုတွေက သူတို့ရဲ့ ရှေ့နောက်စကားနဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုတွေပါ။ ဤပြောင်းလဲနေသော ပုံစံများကို အာရုံစိုက်ခြင်းသည် တော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်များ၏ ထူးခြားမှုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် အစပြုသည်။ ဘယ် တော်လှန်ရေးနှစ်ခုကမှ လုံးဝမတူပါဘူး။ သို့ရာတွင် တော်လှန်ရေးက ယူဆသော ပုံစံများစွာကို စစ်ဆေးခြင်းက တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်း ပုံမှန်များရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အဖြစ်အပျက်များကို စုစည်းခြင်းမှ အကြောင်းရင်းလမ်းကြောင်းများအဖြစ် စုစည်းခြင်း၊ ဤလမ်းကြောင်းများကို အရေးပါသော စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုများအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးကို ရှင်းပြရန် ထိုပုံစံများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရှင်းပြချက်များကို ထောက်ပံ့ရန် လုံလောက်စွာခိုင်ခံ့သော ကိစ္စအတော်များများအတွင်း အကြောင်းရင်းလမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဓိကနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အင်ပါယာများ ပြိုလဲပြီးနောက်၊ ပြည်နယ်အချင်းချင်းစစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ပြီးနောက်နှင့် ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးများ ရွှေ့ပြောင်းနေသည့်အလယ်တွင် တော်လှန်ရေးများ လျင်မြန်စွာ တိုးများလာလေသည်။ တော်လှန်ရေး အဖြစ်အပျက်များ မည်သို့ဖြစ်ပျက်လာပုံမှာ တော်လှန်ရေးအဖြစ်အပျက်များ မည်သို့ဖြစ်ပျက်လာပုံမှာ တော်လှန်ရေးကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ အတင်းအကျပ်ပြုသော ကိရိယာများ၏ သစ္စာစောင့်သိမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကို ပြည်နယ် လက်ရွေးစင်လူတန်းစားတစ်ဦး၏ စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောတော်လှန်ရေးများ မည်သို့ဖြစ်ပျက်လာပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ပုံစံခွက်တစ်ခုမျှမရှိပါက အခြေအနေသစ်များနှင့် ကိုက်ညီရန် အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါသည်။
တတိယနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒပညာရပ် တစ်ခုကို စိတ်သဘောထား ထက် အရေးပေါ် အခြေအနေအဖြစ် မြင်သော ‘ ဆက်ဆံရေး ‘ ချဉ်းကပ်မှု တစ်ခုပေါ်တွင် ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားသည်။ တော်လှန်ရေးအားလုံးကို သမိုင်းအရ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အခြေအနေများမှ ဆင်းသက်လာသည့် လှုပ်ရှားမှု နယ်ပယ်များအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော အဖြစ်အပျက်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုများဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးအားလုံးတွင် ရိုးစောင်းများ ရှိကြသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းရန် အမိန့်ပေးထားသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် အစဉ်အလာ များမှ စုဆောင်းလာကြသည်။ ယင်းက တော်လှန်ရေးများကို သမိုင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင်အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ရပ်စလုံးတွင် သိသာ ထင်ရှားစေသည်။ တော်လှန်ရေးများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စရိုက်လက္ခဏာများပါဝင်ရန် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးခေတ် ကုန်ဆုံးသွားပြီဟု အချို့သူတို့ ယူဆခဲ့ကြသည်။ မဟုတ်ပါဘူး. ယင်းအစား ခေတ်ပြိုင်လောကတွင် တော်လှန်ရေးများသည် ခေတ်ပြိုင်အခြေအနေများနှင့်အညီ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ယင်းက အနာဂတ်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ ခန္ဓာဗေဒများကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဟူသော နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘူဇန်၊ ဘာရီနှင့် ဂျော့ခ်ျ လောဆန် (၂၀၁၅) The Global Transsation : The Nyenth ရာစုနှင့် ခေတ်သစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးဖန်တီးရေး (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ – ကိမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်)။
Gellner, Ernest (1988) Plough, Sword and Book: လူ့သမိုင်းတည်ဆောက်ပုံ (လန်ဒန် : ကောလင်း ဟားဗေးလ်) ။
ဂိုး၊ ဂျူလီယန်နှင့် ဂျော့ခ်ျ လောဆန်တို့ eds. (၂၀၁၇) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒ (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ – ကိမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်)။ ဂိုးလ်စတုန်း၊ ဂျက် (၂၀၁၆) အစောပိုင်း ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် တော်လှန်ရေးနှင့် ပုန်ကန်မှု၊ ၂nd Edition ( လန်ဒန် : Routledge) ။
လောဆန်၊ ဂျော့ခ်ျ (၂၀၁၉) တော်လှန်ရေးရဲ့ ခန္ဓာဗေဒ (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ – ကိမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်)။
ရိုစင်ဘာ့ဂ် ၊ ဂျတ်စတင် (၂၀၁၆) ‘Uneven နှင့် ပေါင်းစပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု : သီအိုရီနှင့် သမိုင်းတွင် “နိုင်ငံတကာ” ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ”: Alexander Anievas နှင့် Kamran Matin eds. သမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒနှင့်ကမ္ဘာ့သမိုင်း– လောင်းဒူးအီး (လန်ဒန်: ရိုမန်နှင့် လစ်တဲလ်ဖီး): 17-30။
ဂျော့ လောဆန်သည် အယ်လ်အက်စ်အီး ရှိ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဌာန တွင် တွဲဖက် ပါမောက္ခ ဖြစ် သည် ။ သူ သည် တော်လှန်ရေး( ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ ၊ ၂၀၁၉ ) နှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ထား သော တော်လှန်ရေး( ၂၀၀၅ ) ၊ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲ မှု (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ ( ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ ၊ ၂၀၁၅ ၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဗေဒ (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ၊ ၂၀၁၇) နှင့် (Chris Arbruster နှင့် Mick Cox)The Global 1989 (ကိမ်းဘရစ်ခ်ျ၊ ၂၀၁၀) ။
Previous articleNLD ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ UEC ပြောတဲ့အပေါ် ဒေါက်တာအမ်ကောလ အမြင် (HD) ■ [မူပိုင်ခွင့်ကို လေးစားပါ။]
Next articleကြေကွဲဖွယ် အရေးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ စပိန်တော်လှန်ရေးမှ သမိုင်းသင်ခန်းစာ